सुनको मूल्य लगातार ओरालो , तोलाको कति !::Nepal's Online News Portal
सुनको मूल्य लगातार ओरालो , तोलाको कति !
मङ्ल, फाल्गुन २८, २०७५
काठमाडौं । आज मंगलबार सुनको मुल्य ओरालो लागेको छ। सोमबारको तुलनामा आज २ सय रुपैयाँ घटेको छ।
आज छापावाल सुन प्रतितोला ६० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ६० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मुल्य पनि ओरालो लागेको छ। आज तेजावी सुन ६० हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ।
हिजो तेजावी सुन ६० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
सुनको मुल्यसँगै आज चाँदीको मुल्य पनि यथावत रहेको छ। आज चाँदी प्रतितोला ७४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका जिल्लामा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोके बमोजिम सुन चाँदीको मूल्य केही बढी पर्न सक्ने छ।
अर्थ बाट अन्य
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य , तोलाको कति पढ्नुहोस्
आज सुनको मूल्य ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।हिजो प्रतितोला ५९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज ३ सय रुपैयाँ बढी ६० हजार रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य...
सुनको मूल्य यथावत
काठमाडौं । हिजो बुधबार बढेको सुनको भाउ आज बिहीबार यथावत रहेको छ। आज छापावाल सुन ५९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै आज तेजावी सुनको मुल्य पनि उकालो...
लाग्यो सुनको मूल्य उकालो ! हेर्नुहोस् बजारभाउ …
काठमाडौं । आज सोमबार सुनको मूल्य उकालो लागेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ५९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो आईतबार छापावाल सुन ५९ हजार १...
फेरि घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ?
काठमाडौं । आज आईतबार सुनको मूल्य झन् ओरालो लागेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ५९ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। गत शुक्रबार तेजावी सुन ५९ हजार...
बढ्यो इन्धनको मूल्य !!!
काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ। बिहीबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य समायोजन गरेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए। निगमले हवाई इन्धन र...
फेरी घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
काठमाडौं । आज मंगलबार सुनको मुल्य ओरालो लागेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ५९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो सोमबार सुन ५९ हजार ९ सय रुपैयाँमा...
कस्तो छ आजको सुनचादीको बजारभाउ ? पढ्नुहोस्
काठमाडौं । आज सोमबार सुनको मुल्य झन् उकालो लागेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ५९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आईतबार सुन ५९ हजार ८ सय रुपैयाँमा...
काठमाडौं, १५ बैशाख । साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ ।गत साताको शुक्रबार तोलामा २ सय रुपैयाले बढेर ५९ हजार ८ सय रुपैया पुगेको छापावाल सुन आज आइतबार पनि...
किन घट्दै छ दिनानुदिन सुनचादिको भाउ ? तोलामा कतिले घट्यो ? हेर्नुहोस् …
काठमाडौं । आज बुधबार सुनको झन् घटेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ५९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो मंगलबार सुन ५९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार...
के छ सुनको मुल्यमा नया अपडेट , पढ्नुहोस्
काठमाडौं । आज मंगलबार सुनको मूल्य घटेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ५९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो सोमबार सुन ५९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार...